WINDOWS 10 VERY FIFANDRAISANA INTERNET TSINDRAINDRAY? ITY NY FOMBA FANAMBOARANA AZY - MALEFAKA
Windows 10 very fifandraisana Internet tsindraindray? Ity ny fomba fanamboarana azy
Indraindray ianao dia mety hiaina Windows 10 solosaina finday izay tsy mitsahatra miala amin'ny Internet. Ary tsy hanana fifandraisana Internet marin-toerana ianao hanaovana hetsika an-tserasera sasany, hijery horonan-tsary na hilalao lalao an-tserasera. Mpampiasa maromaro no mitatitra fa tapaka matetika ny solosaina amin'ny tambajotra Wireless indrindra taorian'ny fanavaozana Windows PC vao haingana very connexion internet misesisesy Vitsy ny hafa mitatitra fa ny Internet dia milatsaka tsindraindray isaky ny minitra vitsivitsy ary mahatonga azy tsy ho afaka hilalao lalao an-tserasera.
Tapaka tamin'ny Internet ny solosainako hatramin'ny nanavaozako ny Windows 10 version 1909. Tapaka izany rehefa niasa aho rehefa nilalao ary indrindra rehefa mijery na inona na inona aho. YOUTUBE .
Eny ary, ny antony dia mety ho isan-karazany ny Windows 10 mampifandray sy misaraka, hatrany hatrany, dia mety ho olana amin'ny tambajotra fitaovana (Router), Network (WiFi) adaptatera, Antivirus firewall manakana ny fifandraisana na tsy mety ny rafitra tambajotra sy ny maro hafa. Na inona na inona antony, mahasorena rehefa mifandray sy tapaka tsy tapaka ny Internet. Eto izahay dia nitanisa vahaolana 5 samihafa izay manampy anao hamaha ny WiFi / Internet tsy mitsahatra manapaka ny olana Windows 10 solosaina finday.
Tapaka kisendrasendra ny fifandraisana Internet
Atombohy amin'ny vahaolana fototra raha vao sambany ianao no miatrika ity olana ity dia manoro hevitra izahay hanomboka indray ny fitaovana Networking (router, modem, switch) dia ampidiro ny PC-nao izay mamaha ny olana raha misy glitch vonjimaika mahatonga ny olana.
Ny elanelana sy ny sakana eo amin'ny solosainao sy ny modem-nao no mety ho antony mahatonga an'io olana io. Raha fohy loatra ny mari-pamantarana WiFi anao, dia eo amin'ny sisin'ny famantarana ianao, tapaka matetika ny WiFi ary very ny fifandraisana amin'ny Internet windows 10 dia manoro hevitra izahay hamindra ny solosaina ho akaiky kokoa ny router ary ialao ny fahatapahan'ny fifandraisana.
Atsaharo vetivety indray ny rindrambaiko fiarovana (Antivirus) na tapaho amin'ny VPN (raha voarindra)
Raha tsy mitsahatra ny wifi amin'ny windows 10 dia tsindrio havanana amin'ny anaran'ny fifandraisana Wifi ary mifidiana adino. Tsindrio indray izao, ampidiro ny tenimiafinao hifandraisana amin'ny tambajotra, ary jereo raha tsy mitsahatra ny WiFi.
Mandehana Network Troubleshooter
Andeha aloha hataontsika ny Build in Internet and network adapter troubleshooter izay manamarina sy mamaha ho azy ny fandrindrana tambajotra diso, manamarina ny olana amin'ny adapter network sy ny mpamily momba ny olana mifanaraka ary ny maro hafa izay manakana ny fiasan'ny Internet araka ny tokony ho izy.
Sokafy ny app Settings amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana Windows + I,
Tsindrio ny Network & Internet,
Midira midina ary tadiavo ny Network troubleshooter ary tsindrio eo,
Hanomboka ny fizotry ny fitiliana ho an'ny olan'ny Network sy Internet izany,
Araho ny toromarika eo amin'ny efijery hamita ny famahana olana
Rehefa vita dia avereno indray ny PC / Laptop ary jereo raha voavaha ny olana.
Reset ny tambajotra
Ity misy vahaolana mahomby izay niasa ho ahy mba hanamboatra ny laptop latsaka avy amin'ny tambajotra WiFi na Internet Connection Disconnects kisendrasendra azo ampiharina amin'ny Windows 10 mpampiasa ihany.
Tsindrio havanana amin'ny Windows 10 Start menu safidio ny Settings.
Tsindrio ny Network & Security dia tsindrio ny Status.
Mandehana midina ary tadiavo ny rohy reset Network, tsindrio eo
Misy varavarankely vaovao misokatra miaraka amin'ny bokotra Reset izao, ary hisy hafatra ho eo koa izay manazava ny zava-mitranga rehefa mampiasa ny bokotra reset izao ianao.
Vakio tsara ny naoty, ary rehefa vonona ianao dia tsindrio ny bokotra reset izao, tsindrio ny eny mba hanamafisana izany.
Amin'ny fampiasana an'ity dingana ity, Windows 10 dia hamerina ho azy ny adaptatera tambajotra rehetra izay natsangana tamin'ny fitaovanao, ary hamerina ny fikaonan'ny tambajotra amin'ny safidiny. Avereno indray ny PC ary jereo raha mifandray tsy tapaka ny Internet ary voavaha ny olana tapaka.
Ovao ny firafitry ny fitantanana herinaratra
Ity dia vahaolana mahomby iray hafa izay manampy ny mpampiasa Windows maro manamboatra ny wifi dia mitazona olana amin'ny Windows 10 solosaina finday.
Tsindrio Windows + R, soraty devmgmt.msc, ary tsindrio ok
Hanokatra Device Manager izany ary hampiseho ny lisitry ny mpamily fitaovana napetraka rehetra,
Ampitomboy ny adapter network ary tsindrio indroa amin'ny adapter wi-fi/Ethernet anao.
Mandehana any amin'ny tabilao fitantanana herinaratra, ary esory ny boaty eo akaikin'ny Avelao ny solosaina hamono ity fitaovana ity mba hitsitsiana herinaratra. Tsindrio OK.
Fanavaozana ny mpamily adaptatera tambajotra
Indray mandeha ny mpamily fitaovana dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny Windows 10 fampisehoana. Raha lany andro ny mpamily adaptatera tambajotra napetraka, tsy mifanaraka amin'ny dikan-Windows 10 ankehitriny dia mety ho very ny fifandraisana Internet ianao. Ary tokony hanavao na hamerina ny mpamily adaptatera tambajotra ianao mba hamahana ny ankamaroan'ny olana amin'ny tambajotra sy ny fifandraisana Internet Windows 10.
Tsindrio havanana amin'ny Windows 10 Start menu ary mifidiana mpitantana fitaovana,
Manitatra ny adaptatera tambajotra,
Tsindrio havanana amin'ny mpamily Ethernet / WiFi ary mifidiana Update Driver Software.
Avy eo, Mifidiana Search ho azy ho an'ny rindrambaiko mpamily nohavaozina ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery.
Tokony hataonao koa izany ho an'ny adaptatera tambajotra hafa ary avereno indray ny PC-nao.
Avereno ny TCP/IP Stack ho default
Raha mbola misy ny olana dia azonao atao ny mamerina ny fandrindrana fifandraisana amin'ny fanarahana ireo dingana etsy ambany.
Fikarohana cmd, Tsindrio havanana amin'ny baiko avy amin'ny valin'ny fikarohana, ary safidio ny mihazakazaka ho administrateur, Ankehitriny dia araho ireto baiko manaraka ireto amin'ny filaharana voatanisa, ary jereo avy eo raha mamaha ny olan'ny fifandraisanao izany.
Ampiasao ny Google DNS
Araka ny filazan'ny mpampiasa vitsivitsy Mivadika amin'ny google, ny DNS dia manampy azy ireo hanana fifandraisana Internet marin-toerana ary hamaha ny olana amin'ny Internet amin'ny Windows 10.
Tsindrio Windows + R, soraty ncpa.cpl, ary tsindrio ok,
Hanokatra ny varavarankelin'ny fifandraisana amin'ny tambajotra izany,
Eto dia tsindrio havanana amin'ny adaptatera tambajotra mavitrika safidio ny fananana,
Avy eo, tadiavo ny Internet protocol version 4 (IPv4) ary tsindrio ny Properties
Safidio ny bokotra radio Ampiasao ireto adiresy mpizara DNS manaraka ireto. Apetraho amin'ny 8.8.8.8 ny mpizara DNS tiana ary ny mpizara DNS hafa amin'ny 8.8.4.4. Kitiho ny OK raha hitahiry ny fanovana
Na izany aza, mila fanampiana? Fotoana izao hanamarinana amin'ny fanoloana ny fitaovan'ny tambajotra (router) ny fitaovana ara-batana dia mety manana olana ary mahatonga ny fifandraisana Internet ho tsy milamina.
Ny Torolàlana momba ny fividianana ny router farany
Windows 10 Laptop tsy mahafantatra écouteur? Ity ny fomba fanamboarana azy
Voavaha: Ny vavahady default dia tsy hita amin'ny Windows 10, 8.1 ary 7
Voavaha Windows 10 Tsy mandeha ny fikarohana